Ny torolàlana an'ny mpividy farany amin'ny fividiananao UV Lamps
Fotoana: 2020-07-20 Hits: 516
(5) Aza atao ny mijery ny faritra ampiasain'ny jiro ultraviolet
(6) Arovy ny skins by covering them and decrease the exposure time
Related Knowledge: Nahoana ny jiro ultraviolet dia ampiasaina amin'ny fanamorana?
Na izany aza, UV-A dia manana IPCE avo lenta kokoa (Fahombiazan'ny Photon-to-Current incidence) mihoatra ny halavan'ny halavan'ny hazavana hafa ary afaka manatratra ny hetsika photocatalyst rehefa mifandray amin'ny TiO2.
Ny endri-javatra mahaliana an'ny onja UV-B dia azo ampiasaina hiarovana ny olombelona amin'ny aretina ary hikarakarana olan'ny hoditra vitsivitsy.
Satria fohy dia fohy ny androm-piainan'ny bakteria & virus tokana, raha vantany vao very ny fahaizany miteraka, dia fahafatesana no dikan'izany. Ka tratra ny tanjon'ny sterilization.
Fahalalana mifandraika: Can UVC light kill the viruses and bacteria?
Fahalalana mifandraika: Is Far-UVC light (222 nm) efficient and safe?
Related knowledge: Fa maninona ireo ankamaroan'ny jiro UV germicidal eo amin'ny tsena dia tsy mahomby?
Mampidi-doza amin'ny olombelona ny jiro mercury UV satria:
Fahalalana mifandraika: Tokony hividy jiro UV Mercury ve aho?
Fahalalana mifandraika: Should I buy UV sterilizing wand?
Miorina amin'ny vidin'ny UVC LED sy ny taham-pahavoazana haingana, tsy azo atao izao ny manatanteraka sterilization mahomby.
Fa raha apetraka amin'ny toerana voafetra ny UVC LED, ho voavaha ny olana rehetra. Noho ny taratry ny hazavana dia hihena ny fahasimban'ny UVC. Ary ny habaka voafetra dia hanome fotoana bebe kokoa amin'ny fizotran'ny fanamorana.
Mba hilalao tsaratsara kokoa ny anjara asan'ny sterilization an'ny UVC, dia maro ny mpanamboatra mihaino ny fitambaran'ny jiro UVC sy ny Unite HVAC.
Nahoana? Satria ny fanafoanana ny rivotra no fampiharana tsara indrindra an'ny UVC amin'izao fotoana izao. Izy irery ihany no afaka mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
1. Toerana kely sy voafetra
2. Fotoana fiasana ampy
3. Miasa amin'ny fisian'ny olombelona
Fahalalana mifandraika: Teknolojia fanamorana rivotra UV mahomby sy mahomby amin'ny taona 2020
Q23. Inona ny Photocatalyst TiO2?
Taloha: Ahoana ny fomba hisafidianana jiro fanaingoana UV avo lenta?
Next: Teknolojia fanamorana rivotra UV mahomby sy mahomby amin'ny taona 2020